Manchester United oo kula dagaalameysa kooxda Barcelona heshiiska Griezmann – Gool FM
(England) 24 Maajo 2019. Wararka ka imaanaya gudaha dalka England ayaa waxay sheegayaan in kooxda Manchester United ay si adag qeyb kaga soo noqotay raacdada loogu jiro heshiiska Antoine Griezmann.
Laacibka reer France ee Antoine Griezmann ayaa shaaca ka qaaday in dhamaadka xili ciyaareedkan uu ka dhaqaaqi doono kooxda reer Spain ee Atlético Madrid, waxaana si adag lala xiriirinayaa Barcelona.
Waxaa la fahansan yahay in Barcelona ay tahay kooxda ugu dhow ee heli karta adeega 28 jirkan, laakiin wargeyska Independent ayaa sheegay in madaxda Blaugrana ay shaki ka qabaan in Griezmann uu yahay ciyaaryahanka saxda ah ee ku haboon safka Barca.
Wargeyska “Daily Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Manchester United ay isku dayi doonto inay ka faa’ideysato dib u dhaca ku yimid Barcelona si ay u qaadato Antoine Griezmann.
Rajada ugu weyn ay kooxda Manchester United ka qabto helitaanka Antoine Griezmann ayaa ah xiriirka wanaagsan ee kala dhaxeeya wiilka maamula khadkooda dhexe ee Paul Pogba, iyo xaqiiqda ah in walaalka la dhashay Griezmann uu yahay taageere weyn ee garoonka Old Trafford.